मलाई बुवाको अ'भाव महशुष हुँदैन, अस्ती बुवाको फोन आएको थियो आवाज सुन्न मन नलागेर न'बोली राखिदिए (भिडियो हे'र्नुहोस) -
[ May 17, 2021 ] सुन चाँदीको मुल्य बढ्यो समाचार
Homeसमाचारमलाई बुवाको अ’भाव महशुष हुँदैन, अस्ती बुवाको फोन आएको थियो आवाज सुन्न मन नलागेर न’बोली राखिदिए (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 28, 2021 admin समाचार 581
नायीका पुजा शर्माले कहिल्यै आफुलाई पिताको अ’भाव नहुने बताएकी छन् । उनले जुन बेला आफुलाई पिता’को सहयोग र सहारा चाहिएको थियो त्यो बेला नपाए’को साथ अब नचाहिने बताएकी छन् ।
वुवाले आमालाई तिर’स्कार गरेका कारण आमासंग मात्रै बस्दै आएकी पुजाको संघर्षको जिवन छ । पुजालाई आमा एक्लै’ले हुर्काएकी हुन् । छोरी भएका कारण पुजा र उनको आमालाई परिवारले तिरस्का’र गरेको उनले यस अघिका अन्तरवा’र्तामा बताएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, मलाई बुवाको अभा’व महशुष हुँदैन, अस्ती फोन आएको थियो । मैले आवाज सुन्ने वित्ति’कै फोन राखिदिए । मलाई कुरा पनि गर्न मन लाग्दैन । मलाई अब चा’हिएको छैन । मेरो हातखु्टा सहि सलामत छन् । आफै केही गरेर खान सक्छु । त्यसैले मलाई बुवाको अ’भाव अहिले छैन । उनले आफुलाई किन फोन गर्नु ? जतिवेला मलाई र मेरो आमालाई परिवारको साथ चा’हिएको थियो त्यती बेला पाइएन । उनीहरु अब मलाई चाहिदैन ।
उनले आफु&लाई जे काम गर्न पनि हिम्मत लाग्ने बताएकी छन् । त्यो साहस आफुलाई आमाले नै दिएको बता’एकी छन् । आमानै आफ्नो जिवन भएकाले आफु’लाई आमाले मात्र हेण्डल गर्न सक्ने बताएकी छन् । आमासंग टाढा हुन नपरोस भनेर नै आफुले विवाहका बारेमा अहिले सोच्न नसके’को बताएकी छन् ।
उनले सकेस’म्म धेरै समय आमासंगै बिताउन चाहेकै कारण विवाह पनि ढिलो गर्ने सोच बनाएको बताए’की छन् । कता कता डर लाग्छ विवाह गरेर जाने घर कस्तो पर्ने हो ? आमालाई हेर्न पाउँछु की पाउँ’दिन यो सबै कुरा सोचेर पनि विवाह’को बारेमा सोच्न सक्दिन । इताजा खबरबाट
काली गण्डकी माथि बन्यो नेपालकै पहिलो स्काई चियर, कफी पिउँदै हिमाल र बन्जीको म’ज्जा लिन सकिने
May 9, 2021 admin समाचार 441
एशिया कै नमुना झो’लुङ्गे पुल बनाएर बन्जी र स्वीङ सञ्चालन गर्दै आएको द क्लिफ प्रालिले आफ्नै रिसोर्ट परिसर बागलु’ङको बलेवामा नेपालकै पहिलो स्काई चि’यरको निर्माण गरेको छ। कालीग’ण्डकी खोँच माथिको स्काई चियरमा बसेर कुश्मा बजार,
मनिषा कोइराला र रेखा थापाको कार्यक्रममा चल्यो रुवाबासी, एकसाथ आ’क्रोश पोखे अब चुप बस्दैनौ (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 26, 2021 admin समाचार 3281
नेपाली अभिने’त्रीहरु अहिले सामाजिक काममा पनि स’कृय हुन थालेका छन् । बलिउड अभिनेत्री मनिषा को’इराला र नेपाली अभिनेत्री रेखा थापा त्यसको उदा’हरण हुन् । राष्ट्रिय एकता परिषद् मार्फत उनीहरु सामाजिक काममा स’कृय भएका छन् ।
March 9, 2021 admin समाचार 2090
यत्तिखेर सामाजिक सं’जालमा एउटा फोटो भाइरल छ । त्यो हो ७० बर्षकी आमाले त्रिविको दिक्षान्त समा’रोहमा लगाएको कालो टोपी अनि पोशक । सोही पोश’कमा सजिएर दिक्षित भएपछि खि’चिएको तस्बीरले धेरैको ध्यान खिच्न पुग्यो । त्यसो
सुन चाँदीको मुल्य बढ्यो
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (175153)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168879)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168662)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168291)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (167286)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166061)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165510)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (163988)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158583)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145541)